War deg deg ah-:Xalmiio yarey oo goor-dhaw la sii daayay. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
War deg deg ah-:Xalmiio yarey oo goor-dhaw la sii daayay.
January 13, 2018	897 Views
Dhuusamareeb-KNN-Maamulka Ahlusunna ayaa goor-dhaw Xabsi Guri kasii daayay Xaliimo Ismaaciil “Xaliimo Yarey” Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay ku xirneed Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.
Qaar ka mid ah dadkii la xirnaa Guddoomiyaha oo aan la hadalnay ayaa Idaacadda kulmiye u xaqiijiyay in hadda la sii daayay, sidoo kalane ay xuriyadooda ay heleyn Darawalkeedii iyo dad kale oo la socday oo ay Ciidamo ku jireyn.
Ahlusunna oo dhawaan la midoobay maamulka Galmudug ayaa wali u dhaqma sida Jabhad oo kale, waxaana dadka degan deegaanada Maamulkaasi ay ka cabanayaan Caburin iyo Caga-juglayn.
Previous: DHAGEYSO:-Barnaamijka Ogaal (13-01-2018)
Next: DHAGEYSO:-Barnaamijka Ciyaaraha (13-01-2018)